Ma Runba in Cabdixakiin Cumar cigaal oo xilkii laga qaaday? – Xeernews24
Ma Runba in Cabdixakiin Cumar cigaal oo xilkii laga qaaday?
23. Januar 2019 /in VIDEO/AUDIO /von admin
Ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay ayaa tibaaxaya in la caydhiyey labo xubood oo kala aha Cabdi Xakim Cumar Cigaal iyo Guuleed Awcali oo maamulka Soomaali-State saamayn ku lahayd iyo koox rabtay inay fashiliyaan isbaddalka ka dhacay deegaanka Soomaali-State.
Ladan Nin ayaa Lagu Magacaaba Cabdixakiin cigaal iyo guuleed kaniisad e) iyo koox rabtay inay fashiliyaan is baddalka ka dhacay deegaanka.
Laamaha amniga ayaa la sheegay inay ku dabo jiraan, rag danbiileyaal ah oo ka soo horjeedsaday rajada shacabka kuwaas oo Ah Kuwii 12kii Sanno ee Danbaysay Dadka Gumadahayay.
Warkan haddu xaqiiq noqto waxay dadka reer Sitti u tahay farxad iyo rajo cusub sababto ah Cabdi Xakim wuxuu masuul ka yahay mashaqadda ka dhacaysa galbeedka gobolka Sitti oo isaggu ahaa ninkii ku faanay in uu gacantiisa ku saxeexay qayb ka mid ah dhulka Sitti burburka iyo barakana maantana u horseeday umadda uu ka dhashay waxayna reer Sitti ku Raja wayn yihiin CabdiXakim sharciga la hor keeno lagana xisaabtamo wixii dhib iyo dhimasho soo gaadhay dhuunyar iyo daymeed.
Geesta kale WAR DEG DEG AH GOLAHA KAABINEETKA DDS AYAA SOO SAARAY GO’AAMO MUHIIM AH OO LA XIDHIIDHA DHINACYADA NABADGALYADA, DIMUQRAADIYADA, CADAALADA IYO SINAANTA EE DDS
WAR DEG DEG AH GOLAHA KAABINEETKA DDS AYAA SOO SAARAY GO'AAMO MUHIIM AH OO LA XIDHIIDHA DHINACYADA NABADGALYADA, DIMUQRAADIYADA, CADAALADA IYO SINAANTA EE DDS
Slået op af SRTV Rasmi Page i Onsdag den 23. januar 2019
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2019/01/cabdi-xakim.jpg 183 276 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2019-01-23 15:59:362019-01-23 15:59:36Ma Runba in Cabdixakiin Cumar cigaal oo xilkii laga qaaday?
Qulqulatooyin Qowmiyadeed laga soo sheegi magaalada Diri-dhaba. Warbixin Guud oo Rasmiya xiisada xadhgaha Goosatay ee DDS kataagan.